Hawlaha dhaqanka qaarkood ee loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta | Ragga Stylish
Fikradaha waxqabadyada dhaqameed ee xagaaga carruurtaada
Waxa lagu sameeyo carruurta xagaaga? Waa waqti dheer iskuul la aan iyo kuwa yar yar ee guriga ku caajisa. Waxa ugu dambeeya waa in lagu xad-gudbo telefishanka, kombuyuutarka, kaniiniga, qunsuliyadaha, iwm. Waxaa ugufiican in la raadsado waxyaabo kale oo kale.
In kasta oo farshaxanka iyo dhaqanku aysan madaddaalin wax badan, haddana waxaa jira nashaadaad dhaqameed oo isku xidhi kara, iyo inay wax badan soo kordhin doonaan.
1 Matxafyada iyo Maktabadaha
2 Maktabadaha wareega
3 Aqoon isweydaarsiyo iyo waxqabadyo dhaqameed
4 Hawlaha kale
Matxafyada iyo Maktabadaha
Goorma waxaan u raacnaa carruurta madxafyada, oo waxaan u sharraxnaa iyaga, waxaan ka dhex arki karnaa iyaga dan weyn oo wax walba leh, sida ay u qaddariyaan una qiimeeyaan waxyaabaha aan laga warqabin.
Booqashadaas ayaa kuheli doonta cunuggu wuxuu yeeshaa dhadhanka waxbarashada, oo ha u arkin oo keliya waajibaad keliya.
Marka laga hadlayo matxafyada, xagaaga dalabka la heli karo kan ugu yar badiyaa waa la waafajiyaa, oo ay ku jiraan waxqabadyada loogu talagalay iyaga kaliya barnaamijyadooda.
Kuwaas oo kale Barnaamijyada waxbarashadaBooqashooyinka iyo booqashooyinka gaarka ah sida caadiga ah waxaa loo diyaariyaa si carruurtu u arki karaan waxa matxafku u bixiyo, laakiin marka laga eego aragti ka duwan, oo ku saleysan ciyaaraha, baashaalka, iwm.
Xilliga kuleylaha, sidoo kale waxaa jira soo jeedimo badan oo maktabadaha loo qaadayo wadada, meel kasta. The "bibliopiscinas" iyo "biblioplayas”Waa ikhtiyaar aad u fiican oo carruurta yaryar ay ku qaadan karaan caadooyinka akhriska, iyada oo loo marayo joornaalada, majaajillada, buugaagta, iwm
Aqoon isweydaarsiyo iyo waxqabadyo dhaqameed
Madxafyada isku midka ah iyo maktabadaha dadweynaha ayaa sida caadiga ah abaabula soo jeedinno firaaqo iyo dadaallo badan, sida ay tahay xaaladdu hawlaha dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiyo.
Waxqabadyada noocan ahi waxay bixiyaan qiimo xiiso leh oo lagu daray samaynta carruurtaada. Xaaladaha oo dhan, xiisaha carruurta ee dhaqanka waa la dhiirrigeliyaa.
Deegaan magaalooyinka, kaamamka xagaaga, dalxiisyada buuraha, iwm Waxaa jira tiro wanaagsan oo waxyaalo ah oo carruurta iyo dhallintu qaban karaan, si ay uga faa'iideystaan ​​waqtigooda firaaqada iyo fasaxyada, oo ay ugu noolaadaan waayo-aragnimo ay ku kobciyaan iyaga.
Ilaha sawirka: Xarunta Parro de la Fuente / FBCV
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Fikradaha waxqabadyada dhaqameed ee xagaaga carruurtaada
5 talo oo aad ku seexan karto
Ururinta cusub ee funaanadaha dhagaxa ee H&M